Magacyada kale ee mashiinka shoogga korantada waa qalabka wadnaha garaaca iyo aaladda daaweyntu ay yar tahay. Kani waa aaladda elektiroonigga ah, badanaa loo isticmaalo baxnaanin jireed ama xanuun joojiye. Marka soo noqnoqoshada hooseysa loo adeegsado daaweynta, Jaban daciif ah ayaa lagu dabaqayaa jidhka bini aadamka waqti isku mid ah. The electrode…
Waxqabadka isha duugmay
Cudurka indhaha waa qalab gaar ah oo loogu talagalay daryeelka indhaha iyo qurxinta iskudarka aragtida casriga ah ee ophthalmology iyo mabaadi'da daawada is-qurxinta Shiinaha ee dhaqanka.. Shayga waxaa si taxaddar leh loogu talagalay iyadoo loo eegayo isha isha iyo qaybinta dhibco dhibco kala duwan oo ku ag yaal aakhirka. Waxeey heesataa 26 finger-shaped massage contacts and…